Kaadị / €0,00 0
Mkpa ka Laghachi a Gem? eme ka ọ dị mfe. Anyị na-agbasi mbọ ike ka ndị ahịa nweta afọ ojuju. Ọ bụrụ na n'ime ụbọchị 30 maka ịnweta akwa nkume gị ị na-enwe afọ ojuju na iwu gị, ị nwere ike iweghachite ya na anyị na ọnọdụ mbụ na nke anaghị emerụ ahụ. Enwere ike ịghaghachi bara nnukwu ego n'oge oge nyocha nke 30 a. Biko Email GEMIC Laboratory maka a Return Authorization Number (Gbaa) Na agbakwunyere Return Ntuziaka. NB: Iwu laghachi na anyị na-enweghị a ọsọ a ga-jụrụ ma laghachi n'ime sender. Nloghachi nkwakọ ngwaahịa na mbupu ụgwọ bụ ibu ọrụ nke ziri ozi. All ahịa na-ikpeazụ mgbe 30 ụbọchị (lọta ihe a ga-postmarked n'ime 30 ụbọchị nke ụbọchị nke iji na-natara). Biko adịghị ajụ izipụ akwụkwọ ozi, kwesịrị na ị chọrọ iji kagbuo iwu mgbe ọ na-e Ẹnam ekese, ma tupu e nyefewo ha n'aka. Ọ bụrụ na iji na-ekweghị, ndị ahịa ga iburu ihe zuru ezu, ihe ma ọ bụrụ na furu efu na ihe nile brokerage ebubo na ọrụ niile metere n'elu ya laghachi. Ozi Mgbakwunye maka iwu enịm n'èzí nke United States: N'ọtụtụ mba, kwuru, butekwara nwere ike ịdabere na ọdabara omenala ụgwọ na ụtụ isi. Azụ ahịa na-ahụ maka omenala ọ bụla, tax na ọrụ ji. Alaghachi mere n'ihi hotara na mbụ-apụghị ikike. ** Ha niile refunds na-mere site na otu usoro dị ka ụgwọ natara. Mbupu, mkpuchi na kaadị akwụmụgwọ nhazi-akwụ ụgwọ ndị na-abụghị refundable. Ọ dịghị restocking ego. Ọ dịghị edochi awa. More Ajụjụ? Kpọtụrụ anyị
Security & Nzuzo
GEMIC Laboratory bụ nchegbu banyere nchekwa na nche nke ndị ahịa anyị. Anyị hụ na anyị na azụmahịa usoro bụ nnọọ mma ma na anyị ahịa ozi bụ ala.
GEMIC Laboratory ikpono ozi nkeonwe na ya website. Your email address ike ga-eji nwa oge n'ịwa email ma ọ bụ iji.
GEMIC Laboratory na-eji ihe nchọgharị kuki aka gị nleta na-eme ka anyị online ịzụ ahịa cart. Ọ dịghị onye ozi na-echekwara na kuki. Cookies ga-nyeere iji nweta niile atụmatụ nke anyị na saịtị. N'ihi na ihe ajụjụ biko kpọtụrụ anyị.
I nwere ike ịtụ a akwụkwọ mgbe ị na tinye otu ihe na gị cart. Iji mee nke a, Pịa njikọ "Tinye mkpuru akwụkwọ a item" na ihe nkowa page n'elu "tinye na ụgbọ ibu" button. Nke a ga-emeghe akwụkwọ nhọrọ.
All ihe na-ekwe nkwa na GEMIC Laboratory. Anyị hụ na ị na-enweta ihe ị na-akwụ maka.
All bara nnukwu uru na GEMIC Laboratory na-ekwe nkwa na-dị ka e kwuru. Anyị ọkachamara mkpara nke ọma inyocha na tụọ onye ọ bụla mkpuru iche.
Kwa gemstone si GEMIC Laboratory bụ eke mkpuru kere site Earth. Anyị na-adịghị emeso na sịntetik ma ọ bụ lab-kere "bara nnukwu uru".
Atule-esi dị mma, ala na mfe na GEMIC Laboratory. Anyị na-enye ndị na-esonụ mgbanwe ịkwụ ụgwọ ụzọ maka emecha gị ka:
Kaadị akwụmụgwọ kwụọ ụgwọ via PayPal (ọ dịghị PayPal na akaụntụ chọrọ) PayPal-anabata Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, EuroCard, Maestro na American Express. PayPal nche ozi.
Ịkwụ ụgwọ gị PayPal na akaụntụ Anyị anọwo a kwetakwara na ego PayPal so. Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu akaụntụ, ị nwere ike mfe imeghe a akaụntụ ọhụrụ site na-eso ndị nọ na ihuenyo ntụziaka.
Ịkwụ ụgwọ site Western Union nyefe Mgbe akwụ ụgwọ site Western Union nyefe, gị ihe ga-edebere ruo ụbọchị atọ. Biko Email anyị pụrụ iche ego azụmahịa nọmba (MTN #) maka gị nyefe. Ozugbo ego a natara, anyị ga-hazie gị ka. Cheta na: Nyefee ụgwọ gaghị deducted si natara ego.
Ịkwụ ụgwọ site kpọmkwem akụ nyefe Mgbe akwụ ụgwọ site kpọmkwem akụ nyefe, gị ihe ga-edebere ruo ụbọchị atọ. Biko Email anyị na akụ nyefe akwụkwọ koodu ozugbo ị malite payment. Ozugbo ego a natara, anyị ga-hazie gị ka. Cheta na: Nyefee ụgwọ gaghị deducted si natara ego.
Na i jikerela elele-mkpu, sị:
Nyochaa gị ahịa ụgbọ ma họrọ gị mbupu method. Anyị na-enye ndị na-esonụ abụọ mbupu ụzọ na udu; EMS (3-4 ụbọchị) Standard Worldwide International ozi ikuku (10-21 ụbọchị)
Pịa "anọgide ọpụpụ" na-abanye na mbupu adreesị.
Họrọ ugwo usoro na pịa "kwuo ugbu a".
Tinye ozi ịgba ụgwọ gị, ma ọ bụ bipụta ntuziaka ihuenyo maka nnyefe ego. Ozugbo e mechara nyere gị iwu, ị ga-enweta nkwenye email n'aka anyị mgbe [Email na-echebe] Cheta na: Biko jide n'aka na ị gbakwunye "[Email na-echebe]"na ndepụta gị nke kọntaktị email na-adịghị ize ndụ iji hụ na ị nwere ike ịnweta ozi mbupu anyị na izipu ozi ịntanetị. Ọ bụrụ na ịnabataghị email ọ bụla site n'aka anyị, biko jide n'aka na ịlele spam ma ọ bụ folda email gị. Ego A ga-akwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ na PayPal ụgwọ naanị na US dollar. A ghaghị iziga ụgwọ site na Western Union ma ọ bụ site na nkwụnye ego n'ụlọ ego na US. Mgbe ị na-ahọrọ ego ọzọ karịa dollar US, a ga-eji ọnụego mgbanwe nke ụbọchị a iji gbanwee ọnụahịa ndị egosiri. PayPal na ụlọ ọrụ nhazi gị (kaadị akwụmụgwọ kaadị akwụmụgwọ) ga-eji ọnụego mgbanwe ha gbanwere ego, ya mere, ebubo na ego gị ahọpụtara ga-adị iche na ọnụahịa ndị e gosipụtara na ego ahụ na weebụsaịtị anyị. Ụlọ ọrụ GEMIC ga-akwụ ụgwọ ego egosiri na dollar US. Ihe ọ bụla ọzọ ụgwọ na-adabere nanị na PayPal, na kaadị akwụmụgwọ kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ Western Union.
Biko hụ n'okpuru maka anyị Mbupu Nhọrọ: Free nnyefe na Phnom Penh & Siem Nweta, Cambodia
Express Mbupu - USD 35
Express butekwara a na-ewere 3-4 ụbọchị n'ihi na nnyefe na a pụrụ esoro online ọ bụla nzọụkwụ nke ụzọ. Ngwugwu-n'ụzọ zuru ezu ịnshọransị. A mbinye aka a chọrọ n'elu nnyefe. Deliveries bụ Monday ka Friday maka ọtụtụ ná mba. Ọ dịghị PO igbe (ma e wezụga UAE, Saudi Arabia na Kuwait), APO ma ọ bụ FPO adreesị ike ga-eji. Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere a 'mbinye aka na file', biko na-akpọ EMS kagbuo a ikike. Nchịkọta na-anapụta enweghị a mbinye aka, n'ihi na a 'mbinye aka na file' enweghị ike kpuchie anyị insurance ụgbọelu.
Standard Registered Mail - USD 6.99
Anyị na-enye edebanyere ozi ikuku na-elekọta 120 mba. Registered mail-insured ruo USD 200. Butekwara na-ihe dị 10-21-arụ ọrụ ụbọchị na-achọ a mbinye aka n'elu nnyefe. E nweghị ndị na deliveries n'ụbọchị Sunday.
nnweta All bara nnukwu uru gosiri dị ka 'dị' na-na ngwaahịa na njikere ozugbo mbupu. Iwu na-esichara n'ime 1 arụ ọrụ ụbọchị Monday - Friday (ewepu Khmer ememe). Ozi Mgbakwunye maka Non-USA butekwara N'ọtụtụ mba (bụghị USA) n'ụzọ kwesịrị ekwesị kwuru butekwara bụ isiokwu omenala ebubo na tax. E debara aha mail na-ewe ogologo, ma a na-ezere ọzọ ụgwọ. Anyị nwere obi ụtọ ka ụgbọ mmiri site EMS, ma biko mara na anyị na-apụghị ịgbanwe mmezi ebubo ahụ nwere ike ime ná mba gị. Cheta na: Import tax ma ọ bụ ọrụ bụ na asịwo kwesịrị ime. Laghachi butekwara na-jụrụ n'ihi na nke ndị dị otú ahụ ebubo ike-anabata. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọ bụla ndokwa pụrụ iche. invoices All nchịkọta si GEMIC Laboratory na-agụnye a zuru akwụkwọ ọnụahịa. Biko kpọtụrụ anyị tupu ịtụkwasị gị iji bụrụ na ị chọrọ a ahaziri akwụkwọ ọnụahịa ma ọ bụ ọ dịghị akwụkwọ ọnụahịa mgbe nile.
GEMIC Laboratory na-eji ndị na-esonụ doo anya scale mgbe grading gemstones: IF : Loupe ọcha - internally-enweghị ntụpọ; free of inclusions. VVS : Almost loupe ọcha - nnọọ nta inclusions; inclusions sonso hụrụ n'okpuru 10x magnification. VS : Eye ọcha - nnọọ nta inclusions; nta inclusions nwere ike hụrụ site zụrụ anya ma ọ bụ n'okpuru 10x magnification. SI : Ubé ​​gụnyere - obere inclusions nwere ike hụrụ na gba ọtọ anya. I : So - inclusions nwere ike hụrụ na gba ọtọ anya.
AED: United Arab Emirates dirham (د.إ) AFN: Afghan afghani (؋) AKWỤKWỌ: Lekọn Albania (L) AMD: Armenian dram (AMD) ANG: Netherlands Antillean Guilder (ƒ) AOA: Angolan kwanza (Kz) ARS: Argentine peso ($) AUD: dollar Australian ($) AWG: Aruban florin (Afl.) AZN: Azerbaijani manat (AZN) BAM: Bosnia na Herzegovina convertible akara (KM) BBD: dollar Barbadian ($) BDT: Bangladeshi taka (৳) BGN: Bulgarian lev (лв.) BHD: Bahraini dinar (.dad) BIF: Burundian franc (Fr) BMD: dollar Bermudian ($) BND: Dollar Brunei ($) BOB: Bolivian boliviano (Bs.) BRL: ezigbo Brazil (R $) BSD: dollar Bahamia ($) BTC: Bitcoin (฿) BTN: Bhutanese agultrum (Nu.) BWP: Botswana Pula (P) BYN: Belarusian ruble (Br) BZD: Belize dollar ($) CAD: dollar Canada (C $) CDF: French Congo (Fr) CHF: franc Switzerland (CHF) CLP: peso Chile ($) CNY: Chinese yuan (¥) COP: Peso Colombia ($) CRC: Costa Rican colón (₡) CUC: Cuban convertible peso ($) OBU: Cuban peso ($) CVE: Cape Verdean chọrọ ($) CZK: Czech koruna (Kč) DJF: Djiboutian franc (Fr) DKK: Danish krone (DKK) DOP: Dominican peso (RD $) DZD: dinada Algerian (د.ج) EGP: Pound nke Ijipt (EGP) ERN: Eritrean nakfa (Nfk) ETB: Etiopia nke obodo Ethiopia (Br) EUR: Euro (€) FJD: Dollar Fijian ($) FKP: Falkland Islands pound (£) GBP: Pound sterling (£) GEL: larịị Georgian (₾) GGP: Guernsey paụnd (£) GHS: Ghana cedi (₵) GIP: Gibraltar paụnd (£) GMD: Gambian Dolsi (D) GNF: French franc (Fr) GTQ: Guatemalan quetzal (Q) GYD: dollar Guyana ($) HKD: Hong Kong dollar ($) HNL: Honduran lempira (L) HRK: Croatian kuna (kn) HTG: Gourde Haitian (G) HUF: Hungarian forint (Ft) IDR: Indonesian rupiah (Rp) ILS: Nkeji nke Israel (₪) IMP: Manx paụnd (£) INR: India rupee (₹) IQD: Iraar dinar (ع.د) IRR: Nnwere onwe Iranian (ọla) ISK: Icelandic króna (kr.) JEP: Jersey paụnd (£) JMD: Jamaica dollar ($) JOD: dinarian Jordanian (د.ا) JPY: Japanese yen (¥) KES: Ụgbọ mmiri Kenya (KSh) KGS: Kyrgyzstani som (сом) KHR: Cambodian riel (na na) KMF: Comorian franc (Fr) KPW: North Korea meriri (ego) KRW: South Korean meriri (ego) KWD: Kuwaiti dinar (د.ك) KYD: dollar Cayman Islands ($) KZT: Kazakhstani tenge (₸) LAK: Lao kip (wdg) LBP: Lound Lebanọn (ل.ل) LKR: Sri Lankan rupee (isi) LRD: dollar Liberia ($) LSL: Lesotho loti (L) LYD: Libyan dinar (ل.د) MAD: Moroccan dirham (د.م.) MDL: Moldovan leu (MDL) MGA: Malagasy ariary (Ar) MKD: denar deninda (den) MMK: Na na na kyat (Ks) MNT: Mongolian tögrög (₮) MOP: Macanese pataca (P) MUR: Rupee Mauritian (₨) MVR: Maldivian rufiyaa (.fa) MWK: Malawian kwacha (MK) MXN: Peso Mexico ($) MYR: Malaysian ringgit (RM) MZN: Mberede Mozambique (MT) NAD: Nwa Namibia (N $) NGN: Naijiria Naira (₦) NIO: Nicaraguan Cordoba (C $) NOK: Norwegian krone (kr) NPR: Nepalese rupee (₨) NZD: dollar New Zealand ($) OMR: Omani rial (ر.ع.) PAB: Panamanian balboa (B /.) PEN: Sol (S /) PGK: Papua New Guinean kina (K) PHP: Philippines peso ($) PKR: Pakistani rupee (₨) PLN: Polish złoty (zł) PYG: Paraguayan guaraní (₲) Ajụjụ: Qatari na-eguzosi ike (ر.ق) RON: Romanian leu (lei) RSD: Serbian dinar (рсд) RUB: Russian ruble (₽) RWF: French Franc (Fr) SAR: Saudi ụgha (ر.س) SBD: Solomon Islands dollar ($) SCR: Seychellois rupee (₨) SDG: Sudanound paụnd (ج.س.) SEK: Swedish krona (kr) SGD: Singapore dollar ($) SHP: Saint Helena pound (£) SLL: Sierra lean (Le) SOS: shilling Somali (Sh) SRD: Dollar Surinamese ($) SYP: okpukpu Syria (ل.س) SZL: Swazi lilangeni (L) THB: Thai baht (฿) TJS: Ụdị nkeji (s) TMT: mande Turkmenistan (m) TND: Tunisian dinar (د.ت) TOP: Tongan ego (T $) TRY: Turkish lira (₺) TTD: Trinidad na Tobago dollar ($) TWD: New Taiwan dollar (NT $) TZS: shilin Tanzania (Sh) UAH: Ukraine hryvnia (ọla) UGX: Ulonda Ugandan (UGX) USD: United States (US) dollar ($) UYU: Peso Uruguayan ($) UZS: Uzbekistani som (UZS) VEF: Venezuelan bolívar (Bs F) VND: Vietnamese đồng (anya) VUV: Vanuatu vatu (Vt) WST: Samoan talā (T) XAF: Central African CFA franc (CFA) XCD: East Caribbean dollar ($) XOF: West African CFA franc (CFA) XPF: CFP franc (Fr) YER: Ụdọ Yemeni (﷼) ZAR: South African rand (R) ZMW: Zambia kwacha (ZK)
Nbanye na Facebook Nbanye na Google